ဂျပန်မှာ အရက်ချက်တဲ့သူတွေက ယောကျ်ားလေးပဲဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း - JAPO Japanese News
ဂျပန်မှာ အရက်ချက်တဲ့သူတွေက ယောကျ်ားလေးပဲဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကြာ 05 Dec 2019, 17:14 ညနေ
ဂျပန်အရက်က ဆန်ကနေ ချက်လုပ်တာပါ။ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ချက်လုပ်ခဲ့ကြမှန်းမသိလောက်အောင်ကို ရှေးကျလွန်းပါတယ်။
ဂျပန်မှာ ဆန်စပါးစတင်စိုက်ပျိုးလာခဲ့တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကတည်းကဆိုတော့ အရက်ချက်လာတာက အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဂျပန်ဒေသအသီးသီကထွက်ရှိတဲ့ အရက်တွေက သူ့ဒေသအလိုက် အရည်အသွေး ထူးခြားကောင်းမွန်ကြလို့ ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပအထိ နာမည်ကြီးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနာမည်ကြီးတဲ့အရက်တွေကို အမျိုးသမီးတွေချက်လို့မရပါဘူးတဲ့။ အံ့သြစရာပဲနော်။ ဒါက ကျား၊မ ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးဆို အရက်ချက်လို့မရတဲ့ အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ်။
အရက်ချက်တဲ့နေရာမှာ ဆန်နဲ့ ရေ ၊ ပြီးတော့ Kojiလို့ခေါ်တဲ့ တဆေးကို အသုံးပြုပါတယ်။ တဆေးမှာပါတဲ့မှိုက ဆန်နဲ့ရေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အရက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရက်ချက်တဲ့ဖြစ်စဥ်မှာ မှိုက အရေးပါပါတယ်။
မှိုကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အရက်ချက်ဖို့သုံးတာ အပြင် Nattō လို့ခေါ်တဲ့ ပဲနဲ့ အချဥ်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင် ချိစ်တို့ ဒိန်ချဥ်ကလည်း မှိုနဲ့အချဥ်ဖောက်ပြီးရထားတဲ့အရာတွေပါ။
ဂျပန်အရက်မှာဆိုရင် အရက်ချက်မှိုက အရေးကြီးပြီး အရက်ချက်စက်ရုံတွေမှာရှိတဲ့ မှိုတွေမတူညီတဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရသာကလည်း ကွဲပြားပါတယ်။
ရေနဲ့ ဆန်ကြောင့်လည်း အရသာကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် ဒီမှိုပါတဲ့တဆေးဟာ အရက်ချက်တဲ့နေရာမှာတော့ အဖိုးတန်ပါ။
အရင်တုန်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း ချဉ်ဖတ်စိမ်ကြပါတယ်။
အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့ဆန်ဖွဲနုဆိုရင် မှိုမွေးထားတဲ့ဖွဲနုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အရွက်တွေကို ထည့်ပြီး အချဥ်ဖောက်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီဖွဲနုကြမ်းပြင်ကို နေ့တိုင်းဂရုမစိုက်ပေးရင် မှိုတွေသေသွားနိုင်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေက ဖွဲနုကြမ်းပြင်ကို နေ့တိုင်းမွှေပေးရပါတယ်။
အဲ့လိုလုပ်ရာကနေ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖွဲနုကြမ်းပြင်က မှိုတွေကပ်လာပါတယ်။ အဲ့လိုကပ်နေတဲ့မှိုတွေက အရက်ချက်တဲ့နေရာက မှိုတွေကို သေစေနိုင်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေကို အရက်ချက်နေရာထဲ မဝင်စေရာကနေ အမျိုးသမီးအရက်မချက်ရဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
မှိုအကြောင်းကို နည်းမလည်တဲ့ ခေတ်ကာလဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ ဝင်လာတာနဲ့ အရက်ပျက်တယ်ဆိုပြီး စကားလက်ဆင့်ကားလာရာကနေ နောက်ဆုံး ဒီလိုအမျိုးသမီးအရက်မချက်ရဆိုပြီး ဖြစ်လာတာနဲ့တူပါတယ်။
ဒီလိုပဲ အရက်ချက်တဲ့သူတွေကလည်း ပဲမစားပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ အပေါ်ကနဲ့ အတူတူပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရင်ဘောင်တန်းလာနိုင်တဲ့ လက်ရှိမှာတော့ အမျိုးသမီးလည်း အရက်ချက်နိုင်လာပါပြီ။
အကြောင်းအရင်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဖွဲနုကြမ်းပြင်တွေက လျောနည်းလာတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေမှာ မှိုကပ်တာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။
ဒီလိုမျိုး ကျား၊မ ခွဲခြားဆက်ဆံတာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ နေထိုင်ပုံ ပြောင်းလာကြောင့် အရက်ချက်တဲ့နေရာမှာတင်မကဘဲ အလုပ်ခွင်မှာပါ အမျိုးသမီးတွေက ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်နိုင်လာတာကလည်း အားကျစရာပါ။ သင်တို့ရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
Super Food အနေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ လူသိများလာတဲ့ Natto
ဖိနှိပ်ခံရပြီး ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ အအိနုယဥ်ကျေးမှု
Tapioca ( Bubble Tea ) Land က မလည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာ
In This Corner of the World ရဲ့အသံသရုပ်ဆောင် Non စံနှင့်တစ်ခဏ !!!!
ဧရာမကဏန်းကြီးတွေဖမ်းပြီး ယန်း 300 million ကိုရှာပေးခဲ့တဲ့ Speed boat !!!